Somaalida iyo Xiddigiska W/Q : Nimco Noor | Laashin iyo Hal-abuur
Somaalida iyo Xiddigiska
Cilmiga xiddigiska ee Somaalidii hore, waxaa habboonaan lahayd in la uruuriyo intii laga awoodo ee wali raadkooda la hayo. Qaabka ay u odorosi jireen Meereyaalka kuna saadaalin jireen maluugta cirka, iyo qaabka ay u sharaxaan cirbixiyeenada maanta ee casriga ah waxbadan ayay iskaga egyihiin.
Xiddigiskii hore ee Somaalidii waxay odorosi jireen halka uu meeruhu joogo iyo siday ukala fadhiyaan, iyagoo ku lamaanin jiray burji ay ku astaamiyaan bahalo, xawayaanno iyo ugaarta qaarkeed. sida burjiga dibqalooca, burjiga sagaarada iwm. Waxay ukala saari jireen, maalinta ,moorada, iyo meeraha, sidaas si lamida haddii meereyaalka qaarkood iyo burjiga qaar ay sannadkaas wada fadhiistaan saadaal ayay ka muujin jireen sandkaas iyo waxii uu la imaandoono.
saadaasha sannadka cusub ee 2014 wuxuu ku curtay meeraha ay Soomaalidu u taqaan Jilboole (Uranus), dadka xeel-dhaarayaasha dhinaca saadaalinta waxay odhan jireen haddii meeraha sanadku uu ku curto meeraha jilboole waxa la filan jiray inuu lee yahay fursado badan oo u baahan in laga faaideysto, meeraha Jilboole, meeraha Saturn ee ay Somaalidu u taqaan (Raage)wuxuu ku dadaalayaa raadinta biyaha ee burjiga scorpio iyo rabitaanka Pluto wuxuu ku noqon doono.
Maalinta berri ah, dhanka waddamada reer galbeedka ah waa maalin fasax taasoo ku salaysan munaasibad diimeed, iyadoo ay dab shidayaan sidaas si lamida ayay Somaalidu cilmi-falaga ugu aadin jireen (Nawruushka) oo ay ku faystayn jireen, waxaana la sheegay in asalkiisa laga soo minguuriyay Iiraan.
Tirsigani wuxuu bilaabmaa habeenka Dabshidka (Naw ruushka) , oo ah habeenka kowaad ee xilliga la yidhaahdo Seermowaydo . Waa hab tirsiimo oo waagii hore laga isticmaali jirey gayga soomaaleeyd.
Dabshidku waa halka ay ka unkanto xisaabinta iyo kala xadaynta xilliyada sannad qorrexeedka, saadaalinta
cimilada, hawada iyo roobka. Waa habkii reer guuraagu ku go’aamin jireen waxyaabo badan oo noloshooda ah
(sida guuritaanka, hayaanka, in adhiga maqasha laga xidhxidho, in sumalka idaha lagu sii daayo, iyo in baarqabka geela lagu furo, ama habeenkaa looba tu’iyo, iwm.)
Qayb kamida qoraalkan, waxan kasoo xigaty qoraallo hore
W/Q : Nimco Noor